Hydropreating na-akpali akpali
Ndị ọzọ na-emegharị
Carbon Molekụla myọ (CMS)
Omumu ihe banyere acid leaching usoro nke Co Mo nke na eme ka hydrotreating catalyst
site ha na 20-11-05
Ejiri usoro usoro mmeghachi omume (RSM) na-amụ ihe ọmụmụ nitric acid nke mkpofu nke Co Mo nke na-eme ka mmeghachi omume hydrotreating. Ebumnuche nke ọmụmụ a bụ ịmebata CO na Mo site na ihe mmefu a na-emefu n'ime ihe mgbaze ahụ n'ụdị soluble mmiri, iji kwado ihe dị ọcha ...
Nkwadebe nke ikuku ikuku molekul site na fiber carbon
Ọ bụrụ na jikọtara ntụpọ nke huanbingwei na CMB jikọtara ọnụ, ihe ọhụrụ ahụ ga-enwe uru ndị a: a gaghị emepụta ájá mgbe eji ya. Ọ bụ 5-FU na-emezi ya. E nwere ike ịkwadebe ihe ndị nwere ike ikuku dị na carbon na ike mgbanwe site na ọgwụgwọ ọzọ na ọgwụ. Ndị ...
Njirimara na ngwa nke carbon arụ ọrụ
Carbon arụ ọrụ: bụ ụdị nke na-abụghị polar adsorbent eji karịa. N'ozuzu, ọ ga-asacha ya mmiri dilch hydrochloric acid, ethanol na-esote ya, wee jiri mmiri saa ya. Mgbe ihichachara na 80 ℃, enwere ike iji ya kọlụm chromatography. Granular arụ ọrụ carbon bụ nhọrọ kachasị mma maka kọlụm ch ...
Rm, 102-104, Buildinglọ 1, No.1008, DongChangZhi Rd,